ဆော်ညဉ်းသံပါတဲ့မတု – MM Online Shopping
both zawgyi & unicode version
အသံပါမှ ဖီးရှိတယ်​ ဆိုတဲ့​ဘော်​ဒါ​တွေ အတွက်​ ဒါ​လေးပြန်​၀င်​လာပါပီ ​ဘေးလူမကြား​စေချင်​ရင်​​တော့ နားကျပ်​​လေးတပ်​ပီးသုံးဗျို့ နံရံကပ်​စုပ်​စွက်​ ပါ​တော့ နံရံကပ်​ပီးလည်းအပီဆွဲ လို့ရတယ်​​နှော်​ တုန်​ခါ7မျိး​တောင်​ဆို​တော့ ​ရှယ်​​ပေါ့
​ဈေးကလည်း 40000 ပဲဆို​တော့အရမ်းတန်​​နေပီ​နှော်
မတူညီတဲ့ တုန်ခါ ၇မျိုးပါရှိပါတယ်
နူးညံ့အိစက်​တဲ့ ထိ​တွေ့မှုကိုခံစားရမှာ ဖြစ်​ပါတယ်​
ရိုးရှင်းပြီး အသုံးပြုရတာ လွယ်ကူစေပါတယ်.
ခွက်ဒီဇိုင်းကို ဖြုတ်ရလွယ်ကူစေသော ပုံစံဒီဇိုင်းကို ဖော်ဆောင်ထားပေးပါတယ်.
USB အားသွင်းကြိုးဖြင့် အားသွင်းနိုင်ပါတယ်.
lithium batteries များဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါတယ်
အားအပြည့်သွင်းပြီးပါက မိနစ် ၆၀ အထိ ဆက်တိုက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
၁ အခွံက နေ မတုကို ဆွဲထုတ်လိုက်ပါ .
ရေဖြင့် သေချာဆေးကြောသန့်စင်ဖုိ့မမေ့ပါနဲ့ .
ဆေးကြောပြီးနောက် သဘောဝအတိုင်း ခြောက်သွေ့ပါစေ ဒါမှမဟုတ် hair dryer ဖြင့် အခြောက်ခံနိုင်ပါတယ်
ထိုနောက် ခွက်ထဲ ပြန်ထည့်ပေးပါ .
အသံပါမှ ဖီးရှိတယျ​ ဆိုတဲ့​ဘျော​ဒါ​တှေ အတှကျ​ ဒါ​လေးပွနျ​ဝငျ​လာပါပီ ​ဘေးလူမကွား​စခေငျြ​ရငျ​​တော့ နားကပျြ​​လေးတပျ​ပီးသုံးဗြို့ နံရံကပျ​စုပျ​စှကျ​ ပါ​တော့ နံရံကပျ​ပီးလညျးအပီဆှဲ လို့ရတယျ​​နှျော​ တုနျ​ခါ7မြိး​တောငျ​ဆို​တော့ ​ရှယျ​​ပေါ့
​စြေးကလညျး 40000 ပဲဆို​တော့အရမျးတနျ​​နပေီ​နှျော
မတူညီတဲ့ တုနျခါ ရမြိုးပါရှိပါတယျ
နူးညံ့အိစကျ​တဲ့ ထိ​တှမှေု့ကိုခံစားရမှာ ဖွဈ​ပါတယျ​
ရိုးရှငျးပွီး အသုံးပွုရတာ လှယျကူစပေါတယျ.
ခှကျဒီဇိုငျးကို ဖွုတျရလှယျကူစသေော ပုံစံဒီဇိုငျးကို ဖျောဆောငျထားပေးပါတယျ.
USB အားသှငျးကွိုးဖွငျ့ အားသှငျးနိုငျပါတယျ.
lithium batteries မြားဖွငျ့ ပွုလုပျထားပါတယျ
အားအပွညျ့သှငျးပွီးပါက မိနဈ ၆၀ အထိ ဆကျတိုကျ အသုံးပွုနိုငျပါတယျ
၁ အခှံက နေ မတုကို ဆှဲထုတျလိုကျပါ .
ရဖွေငျ့ သခြောဆေးကွောသနျ့စငျဖို့မမပေ့ါနဲ့ .
ဆေးကွောပွီးနောကျ သဘောဝအတိုငျး ခွောကျသှပေ့ါစေ ဒါမှမဟုတျ hair dryer ဖွငျ့ အခွောကျခံနိုငျပါတယျ
ထိုနောကျ ခှကျထဲ ပွနျထညျ့ပေးပါ .
Be the first to review “ဆော်ညဉ်းသံပါတဲ့မတု” Cancel reply